Useshele isitudiyo se-stem - iHielscher Ultrasound Technology
Imiphumela yokusesha ye: stem cell ("stem cell")
Ama-stem cell (ASCs) angama-Adipose amaseli we-mesenchymal stem cell (MSCs) atholakala kumaseli we-adipose womuntu. Amaseli we-stem ku-tishu ye-adipose esetshenzisiwe (ebizwa ngokuthi i-stromal vascular ingcezu (SVF)) kufanele abe yodwa ukuze ayisebenzise kamuva ekwelashweni kwezokwelapha noma kwe-cosmetic. I-Ultrasonication iyindlela ephumelela kakhulu nethembekile yokwelapha yokuhlukanisa amaseli we-stem kumaseli we-adipose. Inzuzo yokuhlukaniswa kwesitokisi se-ultrasonic stem ilele eqinisweni lokuthi ukwelashwa kwe-ultrasonic kusekelwe esimisweni esisebenzayo se-hydrate eyenziwe nge-ultrasonic, okuyi-mear shear. Hhayi izengezo zamakhemikhali noma ze-enzymatic ziyadingeka. Ukuhlukaniswa kwesitokisi se-ultrasonic stem kuvumela ukuthi kube ne-protocol ephindaphindekayo, isivuno esiphakeme se-stem ephezulu nekhwalithi ephakeme kakhulu yeseli. I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngezinhlelo ezahlukahlukene ze-ultrasonic ze-sonication eqondile nengaqondile ye-SVF nokukhipha amaseli we-stem asebenzayo kakhulu.